Shirka culamaa'uddiinka Soomaaliyeed oo Fatwa ku soo saaray al-Shabaab - BBC Somali - Warar
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 11 September, 2013, 17:53 GMT 20:53 SGA
Shirkaasi culamaa'uddiinka Soomaalida maalmahani uga socdey magaalada Muqdisho waxaa uu gababadii ku soo saaray ururka al-Shabaab Fatwa uu ku tilmaanatay in ururkaasi uu yahay mid xagjir ah oo diinta si khalad ah u adeegsanaya, isla markaasina ayna bannaanayn in la taageero, amma laga mid noqdo. Shirweynahaasi oo ay ka soo qab galeen culumaa'udiin ka kala yimid dalka gudihiisa iyo dibadiisa, waxa looga hadlayay sida looga hortagi karo xagjirnimada iyo ku talaxtagga diinta, waxana bishan 7-dii furay Madaxweynaha DF Soomaaliya , Mudane Xassan Sheekh Maxamuud. Qodobada Fatwadaasina waxa kale oo ka mid ah in lagu tilmaamay in Kooxda Alshabab ay tahay koox baadiyaysan, una taagan in ay baadiyeyso bulshada Soomaaliyeed. Iyo in manhajkoodu uu yahay mid Khatar ku ah jiritaanka islaamka gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed. Waxa kale oo Fatwadu ay intaasi ku dartay in dowladda Soomaaliyeed ay tahay dowlad muslim ah, iyo in aanay bannaanayn in lala dagaalamo. Sidoo kalena inay waajib tahay in xubnaha Alshabab loo gacan galiyo dowladda. Dhinaca kalena, dowladda waxaa waajib ku ah ayay tidhi in shacabkooda ay ka badbaadiyaan dhibaatada ay ku heyso kooxda xagjirka ee Alshabab
Shaqaalaha markabkii degay oo la dhaliilay 21 Abriil 2014